Aadaa fi fayyaa: Waa'ee rigaa wantoota shanan baruu qabdan - BBC News Afaan Oromoo
Aadaa fi fayyaa: Waa'ee rigaa wantoota shanan baruu qabdan
''Rigaa naaf muri rigaa, naaf muri rigaa keetu na mararee
Yoggaa naaf muruu baattee nin dhufa samii keessa bararee''
Rigaan aadaa, amantaa fi jiruufi jireenya guyyuu keessa dhimma itti bahama. Rigaa muranii kennuun jaalalas ni ibsa.
Warra Oromoo daa'ima garaa haadhaa keessatti kaadhimmatan
Hawaasa keessatti gargar bahuu akka malee wayita ibsan ''Akka rigaa afaanii buutee walitti hin deebinu,'' jedhu.
Gama kaaniin, hawaasa horsiisee bulaa keessatti rigaa fayyadamuun dheebuu bishaanii itti bahu. Wantoota shanan waahee rigaarratti qixeeffanne dubbisaa.
Rigaan fayyaa ilkaanii fi afaanii eeguuf ni fayyada. Mukni uumamaan jiru qorichummaa waan qabuuf ilkaan keenya ququlleessuuf qofa osoo hin taane, fayyummaa afaan keenyaafilee ni gargaara.
Inni lammaffaan ammoo jaalalle ittiin filachuuf gargaara.
''Rigaa abbaadhumti fedhe namaaf hin kennu. Namni hundi namarraa hin fudhatu. Hiriyaa lameen jaalallee waliif ta'antu waliif kenna.
Rigaan jaalalaaf wayita kennamu akka waadaatti ilaalama. Rigaan wal harkaa fudhachuu jechuun jaalala walirraa fudhachuu jechuudha.
Kan biraan ammoo jaallalleewwan lameen akka afaan isaan bushaa'ee wal hin jibbineef gargaara.''
Rigaa fi Me'ee Bokkoo
Rigaan Gumii Me'ee Bokkoo irratti namoota hirmaatan baruuf kan fayyaduudha, kan yeroo ammaa 'attendance' jedhan.
''Gumii Me'ee Bokkoo torban tokko taa'ani. Paarlaamaa torban tokkoof erga taa'anii booda guyyaa saddeettaffaarratti baallii kennanii ba'an.
Torban sana guutuu namni taa'u rigaa qara qabatee dhufa. Rigaa qabatee dhufe guyyaa guyyaadhaan bakka taa'e lafatti suuqee /dongoartee gala. Bakka guyyaa tokko teesse hanga dhumaatti namni biraa hin taa'u. Sumatu taa'a.
Wayita gumiin xumurame seerri lallabamee irraa ba'ame gumii sana namni meeqa akka hirmaate rigaa lafatti suuqamee jiru lakkaawuun baru. Nama torban guutuu hirmaates akkanaan baru.'' jedhan.
Kunimmoo faayidaan isaa namni bakka tokkotti wayita walitti qabamu akka foolii afaan badaa hin qabaannee fi qaamni isaa si'ataa ta'ee akka turuuf fayyada jedhan.
Namni tokko hirmaannaa inni sochii hawaasaa fi siyaasaa keessatti qabu karaa rigaa kanaan mul'isu jedhan Aab Iyyaasuun.
Afoola keessattis haalaan baramaadha
Sirba dabalatee, mammaaksota, hiibboowwaniifi gosoota afoola Oromoo kanneen biroo keessatti waaheen rigaa irra deddeebiin ni ka'a.
Kanneen keessaa muraasa:
Ashaawwalakoo namni qilxuu yaabbataareeRigaa muratee bu'aaree.Ashaawwalakoo, namni kichuu jaalataaree.Jiraa gubatee du'aaree.
Yaa gaaddisa baala ceekaa,
Ejersan muree rigaa koo.
Na laaffisa maalan beeka?
Qabachaan bulee laphee koo!
Doktarri Kabajaa Aartisti Alii Birraa akkana jedhee sirba:
''Rigaa naaf muri rigaa , naaf muri rigaa keetu na mararee
Kanaaf dargaggeessi tokko karaa rigaatiin jaalala qabu shamarree jaal'atetti mul'isa jechuudha.
Rigaan gabaabbatee qabatama.
Yoo dheerate kan gumiiti jedhama.
Kan abbaa otoo hin tahin kan ambaati jedhama.
Kanaaf rigaan walitti dhufeenya hawaasaa mul'isuufis ni fayyada.
Goodayyaa suuraa Hawaasa horsiisee bulaa keessatti rigaa fayyadamuun dheebuu bishaanii itti bahu
Rigaadhaaf muka akkamiitu filatama?
Rigaadhaaf muki sadarkaa duraa irratti filatamu Agargaroo jedhama.
Kaan ammoo Ittacha, Hadheessa kan fayyadamanis jiru.
Hadheessa garuu warri gadaa keessa jiran hin fayyadaman.
Dubbiitu nurraa hadhoofti jedhanii waan yaadaniif hin fayyadaman.
Warri marsaa gadoomaa san keessa hin seenin garuu ni fayyadamu.
Rigaa aadaa fi rigaa warshaa
Bara durii rigaan jiruu fi jireenya uummata keenyaan walqabata kan jedhan Aab Iyyaasuun amma garuu namni kan fayyadamuurra kan warshaatti hojjetame filataa jira jedhan.
''Warri baratee fi gara magaalaatti gale rigaa warshaatti hojjetame malee hin fayyadaman. Akka waan kan warshaatti hojjetame bu'aa olaanaa qabuutti ilaalu. Garuu kan mukaa bu'a qabeessa ta'uusaa abbootiin keenya beekumsa nuuf dabarsaniiru. Wayita rigaa kan mukaatiin rigannu irga foon ilkaanii keenyaa hin miidhu. Kan warshaatti hojjetame garuu irga ilkaanii fixa. Kanaafuu utuu kan aadaa kanatti fayyadamnee wayya.'' jechuun gorsu.
Mukni rigaan irraa tolfamu hedduu bu'a qabeessa ta'uu kan eeran Aab Iyyaasuun rigaan aadaa wayita irraanfatamaa dhufetti gosti mukaa kunis badeera.
Kanaaf Uummanni utuu rigaa mukaatti fayyadamuu eegalee mukeen sanyiin isaanii lafarraa baduuf jedhanillee deebifamanii kunuunfamu jedhan.
Kanaafuu faayidaan rigaan aadaa qabu waan tokko lama otoo hin taane hedduudha jedhan.
Rigaa fi fayyaa ilkaanii
Goodayyaa suuraa ''Ilkaan keenya lamaan gidduu (dental floss) soorata baasnee qulqulleessuu dandeenya''
Hakiima fayyaa ilkaanii ka tahan Dr. Robeeraa Caalaa, rigaan inni aadaa faayidaalee adda addaa kan qabu yogguu tahu, ''hawaasni rigaa ilkaan qulqulleeffachuufi foolii afaanii gaarii qabaachuuf itti fayyadamu,'' jedhu.
''Rigaa fayydamuun ilkaan yommuu qulqulleeffannu, haftee soorataa ilkaan gubbaa hafan ni qulqulleessa,'' kan jedhan Dr. Robeeraa kunis dhibeewwan gama kanaan afaan keenya keessatti mudatan hambisuurratti gahee guddaa qaba jedhu.
Namoonni rigaa fayyadaman ammuma riganii, ammuma kan dhaaban miti - yeroo dheeraaf fayyadamu.
''Yemmuu karaa deemanis, yogguu hojii hojjetanis rigaa fayyadamu,'' kan jedhan ogeessi kun, waanti alagaa tahe tokko afaan namaatti yommuu galu, hancufni baayyinaan afaan keenya keessatti akka oomishamu taasisa jedhu.
''Kunimmoo faayidaa guddaa qaba. Hancufni afaan keenyatti baayyachuun, dhibeewwan afaan keessatti baakteeriyaan uumaman akka isaan miiccaman ykn qulqullaa'an taasisa''.
Kana malees hancufni baayyachuun tortoruun ilkaanii fi irga ilkaaniillee akka hin dhufne taasisas jedhaniiru.
Ogeeyyiin addunyaa gubbaa jiran rigaadhuma aadaa kana bu'uura godhachuun buruushii ilkaaniifi maloota biroo kalaqaniiru. Kunis irra caalaa bu'a-qabeessadha jedhu ogeessi kun.
''Fakkeenyaaf rigaa ilkaanii fayyadamuun, ilkaan keenya lamaan bakka itti walargan gidduu qaqqabuu hin dandeenyu. Gama ammayyaatiin garuu wanta akka kirrii fakkaatuun (dental floss) soorata baasnee qulqulleessuu dandeenya,'' jedhu.
Viidiyoo Aadaa Karrayyuu: Maddoo, dhahannaa rifeensa intala dubraa
"Garaa lama eegadhee lachuu dhiira taanaan dubartii biraatti amartii naa hidhanii fuudhe"